Inqubomgomo yobumfihlo | I-Foundation Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya Resources Inqubomgomo yobumfihlo
Le nqubomgomo yobumfihlo ibeka ukuthi i-Reward Foundation isebenzisa futhi ivikele kanjani noma yiluphi ulwazi olunikeza i-The Reward Foundation lapho usebenzisa le webhusayithi. I-Reward Foundation izinikele ekuqinisekiseni ukuthi ubumfihlo bakho buvikelwe. Uma singakucela ukuthi unikeze imininingwane ethile ongabonakala ngayo uma usebenzisa le webhusayithi, ungaqiniseka ukuthi izosetshenziswa kuphela ngokuya ngalesi sitatimende sobumfihlo. I-Reward Foundation ingashintsha le nqubomgomo ngezikhathi ezithile ngokubuyekeza leli khasi. Kufanele uhlole leli khasi ngezikhathi ezithile ukuqinisekisa ukuthi ujabulile nganoma yiziphi izinguquko. Le nqubomgomo isebenza kusukela ngomhlaka 23 Julayi 2020.
Singase siqoqe ulwazi olulandelayo:
Amagama abantu abhalisa nge-MailChimp
Amagama abantu ababhalisela i-akhawunti ngeThe Reward Foundation Shop
Ulwazi lokuxhumana olufaka ikheli le-imeyili kanye ne-Twitter
Ulwazi lokuxhumana ngabantu ngabanye noma izinhlangano zokuthenga izimpahla noma amasevisi
Olunye ulwazi olufanele ukuphatha le website
Amakhukhi. Ngeminye imininingwane, bona eyethu Cookie yemfihlo
Yini esingayenza ngolwazi sihlangana
Sidinga lolu lwazi ukuphendula imibuzo yakho, ukuthengisela izimpahla noma izinsizakalo ngesitolo sethu, ukukunikeza incwadi yezindaba uma ubhalisa futhi nokuhlaziywa kwangaphakathi ngezinjongo zokukhangisa noma zokumaketha.
Uma ufisa ukuzikhipha ohlwini lwencwadi yethu Yezindaba, kunenqubo ezenzakalelayo yokuthi uyeke ukuthola eminye imininingwane evela kwiThe Reward Foundation Ngenye indlela ungaxhumana nathi ngekhasi elithi "Thola ukuxhumana" futhi sizoqinisekisa ukususwa kwakho ohlwini.
Isitolo sinikeza inqubo yokuthi ususe i-akhawunti yakho. Sizobe sesisusa yonke imininingwane yakho ephathelene naleyo akhawunti.
Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi ulwazi lwakho kuvikelekile. Ukuze avimbele ukufinyelela okungagunyaziwe noma ukuvezwa, siye wafaka endaweni izinqubo ezifanele ngokomzimba, electronic zokuphatha ukuze sivikele futhi kulondeke imininingwane esiyiqoqayo online.
Links kwamanye amawebhusayithi
IWebsite yethu ingase iqukathe links kwamanye amawebhusayithi nesithakazelo. Nokho, once uke wasebenzisa laba links ukushiya indawo yethu, kufanele siphawule ukuthi Awunawo ukulawula ukuthi ezinye website. Ngakho-ke, ngeke yithina esinecala ukuvikelwa kanye nobumfihlo yiluphi ulwazi ngawe ukunikeza ngenkathi ukuvakashela izingosi ezinjalo kanye sites ezinjalo kubuswe yalesi sitatimende sobumfihlo. Kufanele siqaphe futhi sibheke isitatimende sobumfihlo kusebenza kuwebhusayithi umbuzo.
Ukulawula imininingwane yakho siqu
Ungacela imininingwane yemininingwane yomuntu esiyiphethe ngawe ngaphansi kwe-Data Protection Act 1998. Kuzokhokhwa imali encane. Uma ungathanda ikhophi yolwazi olugcinwe kuwe sicela ubhalele iThe Reward Foundation c / o The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR United Kingdom. Uma ukholwa ukuthi noma yiluphi ulwazi esikubambe kuwe alulungile noma aluphelele, sicela ubhalele noma usithumele i-imeyili ngokushesha okukhulu, kuleli kheli elingenhla. Sizolungisa ngokushesha noma yiluphi ulwazi olutholwe lungalungile.
Isitolo Somvuzo Wesisekelo
Siqoqa imininingwane ngawe ngesikhathi senqubo yokuphuma esitolo sethu. Okulandelayo incazelo eningiliziwe yokuthi siziphathe kanjani izinqubo mgomo zobumfihlo ngaphakathi kweSitolo.
Lokho esikuqoqayo nokugcina
Ngesikhathi uvakashela isayithi lethu, sizolandelela:
Imikhiqizo oyibonile: sizosebenzisa lokhu, ngokwesibonelo, sikubonise imikhiqizo osanda ukuyibona
Indawo, ikheli le-IP nohlobo lwesiphequluli: sizosebenzisa lokhu ngenhloso efana nokulinganisa intela nokuthunyelwa
Ikheli lokuthumela: sizokucela ukuba ufake lokhu ukuze sikwazi, isibonelo, ukulinganisa ukuthunyelwa ngaphambi kokuthi ubeke umyalelo, futhi ukuthumelele umyalelo!
Sizosebenzisa amakhukhi ukulandelela okuqukethwe kubhasikidi ngenkathi upheqa isiza sethu.
Uma uthenga kusuka kithi, sizokucela ukuthi unikeze ulwazi olufaka igama lakho, ikheli lokukhokha, ikheli lokuthumela, ikheli le-imeyli, inombolo yocingo, imininingwane yekhadi lesikweletu kanye nolwazi lwe-akhawunti yokuzikhethela njengegama lomsebenzisi nephasiwedi. Sizosebenzisa lolu lwazi ngenhloso, njengokuthi:
Thumela ulwazi lwakho mayelana ne-akhawunti yakho kanye ne-oda
Phendula izicelo zakho, kufaka phakathi ukubuyiselwa kwemali nezikhalazo
Izinkokhelo zenqubo futhi uvimbele ukukhwabanisa
Setha i-akhawunti yakho esitolo sethu
Ukuhambisana nanoma yiziphi izibopho zomthetho esinaso, njengokubala intela
Thuthukisa iminikelo yethu yesitolo
Ukuthumela imiyalezo yokumaketha, uma ukhetha ukuwamukela
Uma udala i-akhawunti, sizogcina igama lakho, ikheli, i-imeyili nenombolo yocingo, okuzosetshenziselwa ukufaka i-checkout yemiyalo yesikhathi esizayo.
Ngokuvamile sigcina imininingwane ngawe uma nje sidinga imininingwane ngezinhloso esiziqoqayo futhi sizisebenzise, ​​futhi asidingeki ngokomthetho ukuthi siqhubeke nokukugcina. Isibonelo, sizogcina imininingwane yoku-oda yeminyaka eyi-6 ngezinjongo zentela nezokubalwa kwemali. Lokhu kufaka igama lakho, ikheli le-imeyili kanye namakheli wokukhokha nokuhambisa.
Sizogcina futhi ukuphawula noma ukuphawula, uma ukhetha ukuwashiya.
Ngubani osethimbeni lethu onokufinyelela
Amalungu ethimba lethu afinyelele ulwazi olusinikeza lona. Isibonelo, bobabili abaphathi nabaphathi be-Shop bangafinyelela:
Ulwazi lwe-oda njengalokhu kuthengwa, lapho kuthengwa nalapho kufanele kuthunyelwe, futhi
Ulwazi lwekhasimende njengegama lakho, ikheli le-imeyili, nolwazi lokukhokha nokuthumela.
Amalungu wethu wethimba afinyelela kulolu lwazi ukusiza ukugcwalisa ama-oda, ukubuyisela izinqubo zokubuyiselwa kwemali nokukusekela.
Yini esabelana ngayo nabanye
Ngaphansi kwale nqubomgomo yobumfihlo sabelana ngolwazi nabantu besithathu abasisizayo ukuthi sinikeze ama-oda wethu futhi sigcine nezinsizakalo kuwe; isibonelo i-PayPal.
Samukela izinkokhelo nge-PayPal. Lapho uhlawula izinkokhelo, enye yedatha yakho izodluliselwa ku-PayPal, kufaka phakathi ulwazi oludingekayo ukucubungula noma ukusekela ukukhokha, njengolwazi lokuthenga kanye nenkokhelo.
Sicela ubheke Inqubomgomo Yobumfihlo ye-PayPal Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.